Kabsado CR2 Faylal ay la CR2 Photo Recovery Software
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray CR2 Photos
Canon waa mid ka mid ah kaamirooyin digital ugu caansan la raaxo leh, iminka iyo sare muuqaalada awood saaxiibtinimo, iyo waxaa sidoo kale loo arko dhexdhexaad ah oo ammaan ah lagu kaydiyo oo aad xajisaan sawiro laga qaaday by camera Canon. Laakiin waa mid aad u macquul ah in sawiro aad ku Canon kamaradaha digital karto kharribeen ama hal maalin geli karin, si aad si fiican si ay gurmad u photos muhiim lahaa. Khasaaraha xogta waa dhibaato aad u daran iyo haddii aad sawiro iyo Nusqaamin CR2 qaab file cayriin ka kamaradaha Cannon, ka dibna waxaad u baahan tahay in la sameeyo dib u soo kabashada sawir CR2.
Waxaa laga yaabaa in aad gaartay CR2 sawiro ay sabab u tahay qalad ah la tirtiro, formatting, kaadhka xusuusta kharribeen ama wax qalad kale aadanaha. Laakiin ma heli careysan sida aad si fudud u samayn karto soo kabashada sawir CR2 la mid barnaamijka. Tani software kabashada sawir ku siinayaa fursada inay ka soo kabsadaan faylasha CR2 si fudud oo waxtar leh. Sida laga soo xigtay nidaamka qalliinka duwan, dooran version saxda ah ee software-kabashada sawir. Halkan waxaan ku tusi sida inuu ka soo kabsado files CR2 in Windows, iyo tallaabooyinka loo sameeyo ee Mac la mid yihiin.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada sawir CR2?
Marka loo soo dajiyo iyo abuurtaan software CR2 kabashada sawir. Halkan ka dooro ruuxaanta kaydinta in ay u tirtiray, formatted, CR2 photos lumay ama la gaari karin, oo ay ku jiraan camera digital, kaadhka xusuusta, darawalka USB ama qalab kale oo lagu kaydiyo ballaaran oo darawal gudaha adag ka.
Talaabada 1: Dooro Risaalo meesha aad khasaaro files CR2
Laga soo bilaabo liiska halkan drives macquulka ah, doortaan Risaalo ka mid ah laga soo badiyay aad files CR2 ay helaan, ka dibna riix "Scan" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad xusuusataan qaabab gaar ah oo aad files lumay, halkan waxaad isticmaali kartaa "Filter Options" in ay doortaan mid ama ka badan oo ah qaabab file, hawsha kaa caawinaysaa in aad si loo yareeyo waqtiga iskaanka iyo si fiican u heli faylasha lumay. Tusaale ahaan, halkan waxaan dooran faylasha CR2 iyo riix "Scan" button.
Talaabada 2: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo ka heli faylasha CR2 laga badiyay
Marka scan ay ka badan tahay, faylasha lumay CR2 halkan ku qor si aad u doorato. Waxaad awoodaa inaad ku eegaan iyo soo qaado waxa aad rabto inuu ka soo kabsado iyo riix batoonka "Ladnaansho".
2. Waxaad "hakinta" ama "la joojiyo"-socodka ah ee iskaanka marka aad ka heli faylasha lumay iyo rabto in aad u soo kabsado si dhaqso ah kartaan. Markaas sii wadaan in ay iskaan faylasha kale haddii loo baahdo.
3. Riix "Save Scan" badhanka si loo badbaadiyo natiijada iskaanka si aad awoodi kartaa in ay sii wadaan soo kabashada sawir waqti kasta oo aad jeceshahay.
Talaabada 3: Sheeg folder soo saarka si loo badbaadiyo files CR2 dib ugu
Dooro meel meesha aad rabto in lagu badbaadiyo files recoverable CR2, ka dibna riix badhanka "Ladnaansho". Halkan waxaan ku heer sare waxaad ku talinaynaa in ay doortaan meelo kale oo ka qoruhu il aad meesha aad khasaaraha files CR2.
Halkan waxaa ah, ugu dambeyntii aad badiyay files CR2 dib ugu wada mar kale!
Video tutorial soo kabashada sawir CR2